Diyaarad sida gawaarida xabbada iska celisa iyo cidamo ayaa Baydhabo ka degay • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Koonfur Galbeed / Diyaarad sida gawaarida xabbada iska celisa iyo cidamo ayaa Baydhabo ka degay
Diyaarad sida gawaarida xabbada iska celisa iyo cidamo ayaa Baydhabo ka degay
October 25, 2018 - By: HORSEED STAFF
Diyaarad sida gawaarida xabbaddu aysan geli karin iyo ciidamo gaaraya 30 askeri ayaa maanta ka degtey garoonka diyaaradaha ee Shaatiguduud magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Diyaaradda ciidanka iyo gawaarida sidey ayaa ka soo duushey magaalada Muqdusho waxaana ay hordhc u ahayd Agaasimihii hore ee NISA Xuseen Cismaan Xuseen oo doonaya in uu tartamo madaxweynaha Koonfur Galbeed, sida ay sheegayaan wararka aan ka heleyno baydhabo.
Qalabka gawaarida iyo ciidanka uu watey Xuseen Cismaan waxaa iska leh Dowaldda federaalka ah ee Soomaaliya oo ku taageertey Musharaxan la aaminsan yahay in uu ka socdo dhanka Dowladda Federaalka.
Xuseen Cismaan ayaa xilkiisi iska casiley dhawaan si uu ugu tartamo doorashada Madaxweynaha Koonfur Galbeed.
Maalmo kahor sadaan oo kale waxaa ka degey garoonka diyaaradaha ee Baydhabo diyaarad wadey gawaarida xabbadu aysan dhaafi karin iyo ciidamo kuwaas o uu watey Wasiirka Tamarta Cabdicasiis Laftagareen, Wasiirku xilkiisi is kama casilin waxaana la sheegayaa in uu u tartamayo Madaxweynaha Koonfur Galbeed, Horseed Media uma suurta gelin in ay hesho xeerka doorashada Koonfur Galbeed in uu u ogglaanayo masuul caynkaas ah oo kale in uu tartamo isaga oo aan xilkiisi hore ka tanaasulin.
Sida muuqata Wasiirka Tamarta haddii uu si rasmi ah ugu dhawaaqo in uu tartamayo iyo Agaasimihii hore ee NISA ayaa donaya in ay meesha ka saaraan siyaasiga muddada dheer soo fadhiyey Shariif Xassan Sheekh Adam, si uu u soo baxo musharax ay Dowladda federaalku taageersan tahay isaguna taageersan.
Shariif Xassan Sheekh Adam ayaa maanta loo doortey Guddoomiyaha golaha iskaashiga Dowlad goboleedyada shirkii garoowe lagu so geba-gebeeyey.
Doorashada Koonfur Galbeed ayaa lagu wadaa in ay dhacdo laba todobaad ee u danbeeya bisha Nofeembar, waana doorashadii labaad ee maamulkaasi yeesho tan iyo markii dhidibada loo taagey 2014.